‘फेरी आउन सक्छ सलह’ - Pradesh Today
Homeफिचर‘फेरी आउन सक्छ सलह’
दाङ, २० असार । दाङका अन्नबालीलाई क्षति पु¥याएको सहल पुनः फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । असार १६ र १७ गते दाङमा झुण्डमा आएको सलहले सबै पालिकामा धोरथेर पालीमा क्षति पु¥याएको र पहाडी जिल्लातर्फ गएको हुँदा त्यो फर्कन सक्ने र पुनः क्षति पु¥याउन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
‘१६ र १७ गतेको सलह झुण्ड फेरि पनि फर्कन सक्छ’ कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख सन्देश धितालले भने, सबै सहज भएर बस्नु जरूरी छ । दाङका सलहको झुण्डले जिल्लाका दशै पालिकाका कुनै न कुनै क्षेत्रमा बालीमा क्षति पु¥याएको छ ।
‘घोराही, तुलसीपुर, लमही, राजपुर, गढवालगायतका क्षेत्रमा उड्ने क्रममा क्षति गरेको छ’ प्रमुख धितालले भने, ‘सलह किराले ५ सय ९० हेक्टर जमिनमा लगाएको मकै, तरकारी र धानमा बसेर क्षति पु¥याएको छ ।
क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन, हामीले आशंका गरेको पालिकाबाट आएको विवरणमा यो अवस्था रहेको छ । कतै धेरै त कतै थोरै क्षति भएको छ । उत्पादनमा खासै समस्या पर्दैन । पात खाएको यसले पछि रिकोभर हुन्छ । ज्ञान केन्द्र प्रमुख धितालले जिल्लाका दश स्थानीतहका प्राय क्षेत्रमा लगाएको मकै, धान र तकारी बालीमा सलह किराले प्रभाव पारेको बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं २, १०, ११, १८, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं, १३, १४, १६, १७, १२, १९ वडामा सलह किराले क्षति पु¥याएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं २, ४ र ५, लमही नगरपालिकाको ६ र ८ नम्बर वडामा क्षति गरेको छ ।
लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १, २, ५, ४, ९ नम्बर वडामा लगाएको मकै, तरकारीमा असर गरेको छ । गढवा गाउँपालिका वडा नं. ७, राजपुर गाउँपालिकाको २ र ७ नम्बर वडामा सलह किराले मकै बालीमा क्षति गरेको छ ।
पहिलो पटक सलह किराले किसानले लगाएको मकै, तरकारी र धानमा क्षति गरेपछि किरा धपाउन किसानलाई सचेत गर्दै सामूहिक अभियान थालिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । दिनमा एउटा किराले आफ्नो औसत शरीरको तौल बराबरको करिब २ ग्राम खान्छ ।
औसतमा एउटा सानो सलहको झुण्डले (एकटन बराबरको) एक दिनमा बढीमा १० हात्ती वा २ हजार ५ सय मानिसले खाने आहारा बराबरको वनस्पतिहरू नष्ट गर्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । दाङमा सलह किरा दशकौ वर्षपछि आएको बुढापाकाहरूले बताएका छन् ।